Mahoraka any Etazonia izao fa mitombina ny mety ho fisiana piraty informatika nanampy ny filoham-pirenena, Donald Trump, izay avy amin’ny elatra repoblikanina ka nahatonga azy ho lany. Araka ny fampitam-baovao dia nahangona volabe nitentina 3,3 tapitrisa dolara tao anatin’ny 24 ora ny mpanohana ity filoha ity ka mety io no nahafahany nanova ny isam-bato tampoka tao amin’ireo fanjakana anisan’ny matanjaka 3 dia i Wisconsin, Michigan ary Pennsylvanie. Raha atotaly dia 4,5 tapitrisa dolara no voalaza fa voavory ka nahafahana nametraka ireo mpikirakira masinina nanao fifidianana piraty tamin’ny alalan’ny masinina elektronika. Vokany, mety ho tonga any amin’ny famerenana ny fifidianana ity raharaha ity.Nanomboka ny alin’ny 9 novambra ka mandrak’ankehitriny moa dia miha mahery vaika ny fanoherana ny fahalanian’i Donald Trump na any Etazonia na any amina firenen-kafa; ity mpanefoefo ity izay ambaran’ny rehetra fa mpanavakava-bolon-koditra no sady olona manohitra ny fanatontoloana sy ny rafitra mahazatra nisy hatrizay ary mety tena hanova ny tantaran’i Etazonia sy ny an’izao tontolo izao mihitsy raha izy marina no lasa filoha.